राज्य र पार्टीजस्तै पत्रकार पनि मधेसप्रति किन पूर्वाग्रही ?
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeसमाजसमाजराज्य र पार्टीजस्तै पत्रकार पनि मधेसप्रति किन पूर्वाग्रही ?
Thursday, 14 January 2016 16:54	Rate this item
‘राज्यका निकाय र राजनीतिक पार्टीजस्तै काठमाडौंका मिडियाले पनि मधेससँग न्याय गर्न सकेको छैन । ती निकायजस्तै पहाडे मूलका मिडियाकर्मी र मिडियासम्बद्ध संघसंस्थाले समेत मधेसलाई जहिले पनि आग्रहपूर्ण व्यवहार गर्दछ,’ कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पहाडे मूलका एक जना पत्रकारको भनाइ हो यो । ‘जारी मधेस आन्दोलन र भावी दिशा’ भन्ने शीर्षकमा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तक्र्रियामा मधेस आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने ती पत्रकारले मधेसप्रति रहँदै आएको काठमाडौंका मिडियाको भेदभावपूर्ण रबैयाको विरोध गरे । त्यति मात्रै होइन, उनले मधेस आन्दोलनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको वक्रदृष्टिप्रति पनि तीखो असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘आज मधेसमा मधेस पत्रकार महासंघ जन्मिएको छ । यो नेपाल पत्रकार महासंघको वैधतामाथि ठाडो चुनौती हो ।’ उनले मधेसका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानका हकहितका लागि हालै गठन गरिएको संस्थाको सन्दर्भ पनि उप्काए । कार्यक्रममा त्यस नवगठित संस्थाका संयोजक वृजकुमार यादव पनि उपस्थित थिए । यादवको पहलमा गत पुस १८ गते जनकपुरमा तराईमधेसका पत्रकारहरुको एक भेला सम्पन्न भएका थियो र उनकै नेतृत्वमा १३ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।
‘काठमाडौंका नेता र प्रशासकहरुले मात्र होइन, काठमाडौंका ठूला भनाउँदा पत्रकार र मिडियासम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत दुई वटा नेपाल निर्माण गरेका छन् । एउटा बर्दिवास, चन्द्रनिगाहपुर र सिमरामाथिको नेपाल र अर्को त्योभन्दा मुनिको नेपाल,’
कार्यक्रमको समापनपछि अग्रज पत्रकार यादवसँग महासंघ गठनको उद्देश्य र सान्दर्भिकताबारे जान्न चाहें । ‘काठमाडौंका नेता र प्रशासकहरुले मात्र होइन, काठमाडौंका ठूला भनाउँदा पत्रकार र मिडियासम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत दुई वटा नेपाल निर्माण गरेका छन् । एउटा बर्दिवास, चन्द्रनिगाहपुर र सिमरामाथिको नेपाल र अर्को त्योभन्दा मुनिको नेपाल,’ भन्दै यादवले आफूले बर्दिवासमुनिको नेपालको पहिचान र अधिकारका लागि मधेस पत्रकार महासंघ गठन गरेको बताए ।
‘जारी मधेस आन्दोलनबाट प्रभावित सञ्चारकर्मी र मिडिया प्रतिष्ठानको अवस्था बुझ्न नेपाल पत्रकार महासंघको एक टोली हालै मधेस झरेको थियो । तर त्यस टोलीका सदस्यहरु बर्दिवास र सिमराभन्दा तल गएनन् । सिमरा र बर्दिवासमै कार्यक्रम सकेर प्रतिवेदन सार्वजिक गर्दै काठमाडौं फर्किए । राजनीतिक पार्टीहरुजस्तै के उनीहरुको लागि पनि मधेस भनेको सिमरा र बर्दिवास मात्र हो ?,’ यादवले प्रश्नयुक्त आक्रोश पोखे ।
उनले प्रेस काउन्सिललाई पनि बाँकी छाडेनन्, ‘प्रेस काउन्सिलले पनि भेदभाव गर्छ । जारी मधेस आन्दोलनको कभरेजको सन्दर्भमा लिएर काउन्सिलले मधेसका पत्रपत्रिका र एफएमहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर काठमाडौंका कथित राष्ट्रिय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनप्रति देखाएको उदासीनता र जारी राखेको पूर्वाग्रहपूर्ण कभरेजबारे चुँं पनि बोलेन ।’
यादव आफ्नो पत्रकारिता जीवनको आरम्भदेखि नै नेपाल प्रेस युनियनसँग आबद्ध थिए । उनी नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषा शाखाको सभापति भइसकेका छन् भने महासंघकै पदाधिकारीमा समेत चुनाव लडिसकेका छन् । जनकपुरमा उनको आफ्नै जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप छ भने हाल उनी बीबीसी नेपाली सेवा र द हिमालयन टाइम्स अंग्रेजी दैनिकसँग पनि आबद्ध छन् । ‘प्रेस काउन्सिलले पनि भेदभाव गर्छ । जारी मधेस आन्दोलनको कभरेजको सन्दर्भमा लिएर काउन्सिलले मधेसका पत्रपत्रिका र एफएमहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर काठमाडौंका कथित राष्ट्रिय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनप्रति देखाएको उदासीनता र जारी राखेको पूर्वाग्रहपूर्ण कभरेजबारे चुँं पनि बोलेन ।’
त्यही कार्यक्रममा सहभागी रहेका र काठमाडौंको एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा काम गरिरहेका एक जना मधेसी मूलका पत्रकारले राष्ट्रिय भनाउँदा ठूला दलहरुको समानान्तर मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरुको गठन भएजस्तै मधेसमा पेसागत संघसंस्थाहरु पनि स्थापित हुनु अत्यन्तै दूभाग्यपूर्ण भएको बताए । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका राष्ट्रिय भनाउँदा संघसंस्थाको भेदभावपूर्ण व्यवहार नै दोषी रहेको आरोप समेत लगाए ।
इसमतासँग कुरा गर्दै नवगठित मधेस पत्रकार महासंघका संयोजक यादवले महासंघकै प्रचारप्रसार र विस्तारको क्रममा आफू एक हप्तादेखि काठमाडौंमा क्रियाशील मधेसी मूलका पत्रकारसँगको भेटघाटमा सक्रिय रहेको जानकारी दिए । मधेसका २० जिल्लाका साथै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा चाँडै तदर्थ समिति गठन गरेर आउँदो बैशाख महिनाभित्रै पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने यादवले बताए । महासंघको केन्द्रीय कार्यालय मधेसकै कुनै सहरमा राख्ने उल्लेख गर्दै उनले संघीय संरचनाको मर्मअनुरुप नै महासंघको सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी चलिरहेको बताए ।	Read 541 times	Tweet
« यसरी नेपालको उपनिवेश बन्यो मधेश (विचार) सुजीतकुमार झा	आन्दोलन ‘साबोटेज’ गर्न मात्र वार्ताको नाटक गर्ने भुल सरकारले नगरोस् - जितेन्द्र सोनल »